पोखराकी एक महिलाको आरडीटी परीक्षण पोजिटिभ ! « Pokhara Pati
पोखराकी एक महिलाको आरडीटी परीक्षण पोजिटिभ !
प्रकाशित मिति : २०७७ बैशाख ३, बुधबार
दोस्रोपटक परीक्षण गर्दा समेत पोजिटिभ देखिएकोले स्वाब परीक्षणका लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको छ। उक्त स्वाब पीसीआर मेसिनमा परीक्षण पश्चात कोरोना भाइरस भए/नभएको पुष्टि हुने पोखरा महानगर स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ ।
पोखरा–१२ का अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीका अनुसार ती महिला आफ्नै घरमा एक्लै बस्दै आएकी थिइन्। उनी दुबईमा रहेका छोरालाई भेटेर चैत ८ मा नेपाल फर्किएको बताईएको छ । यो खबर ईकान्तिपुरमा दिपक परीवारले लेखेका छन् ।